Daawada dabiiciga ah: Cuntooyinka keena Bakteeriyada wanaagsan | Cuntada Nutri
Daawada dabiiciga ah
Michael Serrano | | Alimentos, Nafaqeyn
Ma u baahan tahay inaad hagaajiso dheef-shiidkaaga? Qaadashada probiotics-ka dabiiciga ah ayaa kaa caawin kara inaad tan gaarto maxaa yeelay waa la tixgeliyaa soo celinta dheelitirka bakteeriyada ee mindhicirada.
Soo ogow faa iidooyinka kale ee loo aaneynayo sheydaan si ballaaran looga hadlay, iyo sidoo kale cuntooyinka aad si dabiici ah ugu dari karto cuntadaada.
1 Waa maxay probiotics?
2 Ma waxay la mid yihiin prebiotics
2.1 Ma shaqeeyaan?
3 Sidee loo helaa probiotics-ka dabiiciga ah
4 Ku saabsan daawooyinka loo yaqaan probiotic
Waa maxay probiotics?
Si loo sharaxo waxa ay probiotics yihiin, jiritaanka bakteeriyada wanaagsan iyo tan xun ee dabiiciga ah waa bilow wanaagsan. Probiotics waxay ka tirsan tahay kooxda koowaad. Waxay ku saabsan tahay noolaha waxtar u leh ee ku dhex nool jirka waxayna door muhiim ah ka ciyaari lahaayeen caafimaadka guud.
Probiotics waxay yareyneysaa tirada bakteeriyada xun. In sidan, waxay gacan ka geysaneysaa in la ilaaliyo dheelitirka caafimaad ee heerarka bakteeriyada ee mindhicirada. Intaas waxaa sii dheer, bakteeriyadan iyo khamiirkan ayaa lala xiriiriyay faa'iidooyin kale oo badan oo caafimaad. Dadka qaarkood waxay u qaataan:
Daawee shubanka, caloosha, iyo gaaska. Badanaa waxaa loo isticmaalaa antibiyootikada si loola dagaallamo waxyeelada ay ku qabaan shaqada mindhicirka.
Dawee calaamadaha xanuunka 'ulcerative colitis' ama cilladda mindhicirka ee xanaaqa
Adkee nidaamka difaaca jirka
Yaree dulqaad la'aanta laaktooska
Ka hortag godadka
Hagaajinta shaqada maskaxda
Ka hortag xasaasiyadda
Ka ilaali infekshannada bakteeriyada
Iska yaree calaamadaha cambaarta ama cudurka psoriasis
Yaree calaamadaha xanuunka daalka daba dheeraada
Kor caafimaadka guud
Ma waxay la mid yihiin prebiotics
Maya, waana lagama maarmaan in aan lagu jahwareerin prebiotics. Si ka duwan probiotics, prebiotics ma hayso bakteeriyada nool. Taabadalkeed, waxa ay cuntooyinka prebiotic sameeyaan waxay siinayaan taxane ah maaddooyinka bakteeriyada wanaagsan ee horeyba ugu jirtay mindhicirkaaga si ay u kori karaan. Asparagus, miro, iyo digiraha waa cuntooyinka prebiotic.
Waxaa jira dad badan oo sheeganaya inay soo mareen horumarin caafimaadkooda (gaar ahaan marinka caloosha) ka dib markay qaateen probiotics. Laakiin sidoo kale waxaa jira tiro badan oo cilmi baarayaal ah oo, in kasta oo ay garwaaqsan yihiin faa'iidooyinka qaarkood, ay rumeysan yihiin taas daraasado badan ayaa wali loo baahan yahay oo laxiriira dhammaan faa'iidooyinka ay laxiriirayaan. Dhinaca kale, waxaa muhiim ah in la ogaado in ay jiraan noocyo badan oo ka mid ah probiotics. Saamaynta uu ku leeyahay jirka way ka duwan tahay iyadoo kuxiran nooca probiotic ee su'aasha laga qabo.
Sidee loo helaa probiotics-ka dabiiciga ah
Waxaad kuheli kartaa probiotics-ka adigoo adeegsanaya cuntooyinka khamiirka leh. Yogurts waa isha ugu caansan ee probiotics-ka dabiiciga ah. Waxaa lagula talinayaa inay xoojiyaan lafaha. Noocyada dufanka yar iyo kuwa sonkorta yar ku jira waxaa badanaa lagu daraa qorshooyinka miisaanka oo yaraada, gaar ahaan qado ama cunto fudud.
Laakiin iyadoo laga yaabo inay tahay tan ugu fudud ee la heli karo, yogurt ma aha cuntada kaliya ee loo yaqaan 'probiotic food'. Waxaa jira wanaag kale ilaha probiotics ee cuntadaada oo mudan in laga fiirsado:
kefir: Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah ilaha ugu wanaagsan ee probiotics, kefir waa cabitaan caano qallalan oo ka soo jeeda Caucasus. Waxaa lagu diyaariyaa adoo ku daraya qanjira kefir caanaha lo'da ama riyaha. Guud ahaan si wanaagsan ayey ugu dulqaadan karaan dadka qaba dulqaad la'aanta laaktooska, laakiin haddii aad u baahan tahay inaad sameyso caano la'aan, beddelka sida kefir biyaha ayaa mudan in la muujiyo. Adiga ayaa ka dhigi kara gurigaaga ama ka iibsan kara kefir diyaarsan dukaanka.
Sauerkraut: Waa kaabash khamiir leh. Kiimikada Kuuriya waa cunno kale oo loo yaqaan 'probiotic' oo lagu diyaariyo cuntadan (khudaarta kale).
Miso: Waa baastada Jabbaan ee lagu sameeyo firileyda kaladuwan ee kaladuwan. Waxay kuxirantahay faa'iidooyin caafimaad oo muhiim ah, waxaa badanaa loo isticmaalaa maraq miso.
Farmashiyaha qaarkood: Mozzarella, cheddar, aqal, gouda ... Inkasta oo ay faa iidooyin leedahay, jiiska waa in markasta si dhexdhexaad ah loo cunaa.
Qajaar la shiiday: Si loo soo saaro saameyn probiotic ah, waa inay ahaadaan kuwo aan khal lahayn.
Tempeh: Waa nooc caan ah oo laga soosaaray Indooniisiyaanku. Dunida inteeda kale waxay noqotay cunno aad loogu qiimeeyo hodanka ay ku tahay borotiinka, gaar ahaan dadka raaca cuntada khudradda.
Probiotics-ku wuxuu yeelan karaa xoogaa saameyn ah, badiyaa waa yar yahay. Xaaladaha qaarkood waxay soo saari karaan gaas khafiif ah iyo dibbiro. Haddii ay sidan kugu saameeyaan, iskuday inaad yareyso qaddarka.
Ku saabsan daawooyinka loo yaqaan probiotic
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu helo probiotics iyada oo loo marayo cuntada, laakiin sidoo kale waa suurtagal in la siiyo probiotics jirka iyada oo loo marayo nafaqada. Kaabsoolka, budada, ama qaabka dareeraha ah, kaabayaasha ayaa ka dhigaya helitaanka probiotics mid aad ugu habboon. Si kastaba ha noqotee, iyagu ma ahan heer nafaqo oo la mid ah cuntooyinka probiotic.
Ugu dambeyntiina, sida waxyaabo badan oo dheeri ah, qaadashadooda ayaa badbaado kuu noqon karin. Kahor intaadan bilaabin qaadashada daawada probiotic ama nafaqada nooc kasta ha noqotee, waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato dhakhtarka, qaasatan dumarka uurka leh ama nuujinaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Nafaqeyn » Daawada dabiiciga ah
Aluminium iyo caafimaad
Miisaanka ayaa ruxaya